Kuroora Mabhero muSychelles Islands
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Vanodanana Michato Honeymoons » Kuroora Mabhero muSychelles Islands
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Seychelles Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • Kuvakazve • Vanodanana Michato Honeymoons • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Iwo marimi erudo achiri kupisa mukati mekunakidza Seychelles Islands, uko vamwe makumi mapfumbamwe nevanomwe vakaroora vakafamba nemugwagwa kubva muna Nyamavhuvhu 97, 1, uye vamwe vazhinji vachitsvaga mukana wakakwana wekusunga pfundo sezvo kushanya kuchizotangazve kwazviri kuenda.
Kutevera kuvhurwa kweInternational Airport yavo, kuenda kwave kutanga kuona musika wayo wemuchato uchidzoka kuupenyu.
Ipo yapererwa neparadhiso yetropiki, vaviri vakaroorana, sekureva kwaRegistrar yeMuchato kubva kuSychelles department reImigration uye Civil Status, vakaroora muna Chikumi. Zvakare, nekuvhurwa kwendege, michato minomwe yakaitika kuPraslin uye michato makumi mapfumbamwe yekuenda yakaitika Mahé, Silhouette neEnchanted Island kubva Nyamavhuvhu. Vaviri kubva kumakona ese epasi vachiri nemoyo yavo yakatarwa kuSychelles senzvimbo yemuchato yavo nemibvunzo yakawanda ichiitwa zuva nezuva.
Nekudanana kunogara kuripo mumhepo, zviremera zvemuno nekutengeserana zviri kuona kuti hapana dombo rinosiiwa risina kuvhurwa kana zvasvika pakuchengeteka. Nyanzvi dzevashandisi vemuchato uye vanoenderana nevanopa masevhisi ezvitsuwa izvozvi vari kushanda pasi penzira itsva dzekuchengetedza dzinodiwa pasi pechinyakare chitsva.
Mahombekombe akajeka enzvimbo yacho, nejecha rayo jena uye nemvura yakachena, yakaratidza kuve nzvimbo inozivikanwa kwazvo yemichato. Kuchengeta izvi mundangariro, maitiro akaiswa munzvimbo kuona kuti vadikani vanogona kunge vaine basa repedyo apo vachichengetedzwa. Kusangana kushoma kunofanira kuitwa pakati pevarongi vemichato nevatengi vavo kuburikidza nezviyero zvakaita sekushamwaridzana nevanhu, kushandiswa kwezvinhu zvinoraswa zvinogadziriswa zvigadzirwa pese pazvinenge zvakakodzera, pasina kugoverana kwezvinhu uye kushandiswa nguva dzose kwemishonga inouraya utachiona uye hutsanana.
Pamusoro pezvo, zviwi zvine mukurumbira nekuda kwemahotera emhando yepamusoro, ayo ari nzvimbo dzakakurumbira dzemichato. Kunyangwe 'michato yemukamuri' isingatenderwe, izvozvi, iwo mahotera akasiyana siyana akasimbiswa ane nzvimbo dzakasiyana dzakashama, zvakaenzana zvakanakisa semabhawa, anowanikwa kune vakaroorana kusarudza kubva. Vatengi vanofanirwa kutevedzera nemitemo yehotera nekuchengetedza, iyo inosimbiswa nePublic Health Authority neDhipatimendi reKushanya. Zvakafanana nemichato yemahombekombe, matanho akadai sekushamwaridzana munharaunda, maitiro ekuchenesa uye kuraswa kwakakodzera kwezvinhu zvakashandiswa zvakaiswa kuchengetedza hutengi hwevatengi panguva yemhemberero yavo.
Huwandu hunokurudzira hwemichato munzvimbo yekuenda hunoratidza kuti inoramba iri imwe yenzvimbo dzinozivikanwa dzemuchato, ichiri kufadza moyo yevanoda pasi rese.
Ipo nyika yakafukidzwa nenyonganyonga uye kusava nechokwadi, iko kudikanwa kwekupemberera rudo uye kudanana kwakadzika. Ndeipi nzvimbo inogona kuve yakanaka kutanga hupenyu hwenyu pamwe chete pane zvitsuwa zvine runyerekupe rwekuti kumusha kweBindu reEdeni, kwakatangira hupenyu hwese.
Dzimwe nhau nezve Seychelles Islands
Nhaka yeTokyo 2020 inogona kuve nemhedzisiro pane ...
Aviation Workforce Kudzidziswa kwakakosha kune post covid
India yekufamba uye kushanya kwakatarisana nedambudziko rezvehupfumi
Chirevo chaSachigaro weAfrican Union ...
Skal Roma uye Skal Bucharest: Kutanga Kubwinya kweSkele ...
Qatar Airways inowedzera US network kune anopfuura zana pasvondo ...
Lufthansa inotangazve kukosha kwayo North America neAsia ...
Fraport inogamuchira denda muripo wekuchengetedza ...
Skål Asia Mutungamiri: Sangana nemumiriri Andrew J. Wood
Iwo Seychelles Islands: Yako Yekushanda Utopia
Vashanyi vakarwiswa, vakaurayiwa, vakadyiwa nebere rine nzara vachiri ...
IATO Anotarisana Akatarisana neHurumende yeIndia